प्रचण्डको फोनले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन स्थगित, ओलीलाई राहत ! « Nepal Bahas
प्रचण्डको फोनले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन स्थगित, ओलीलाई राहत !
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५५
१६ कात्तिक, सुर्खेत । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने काम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
आफूलाई हटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुको योजना असफल पार्न मात्रै नभई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गर्ने मन्त्रीलाई नै हटाउन लागेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अन्ततः प्रचण्डको फोनपछि पछि हटेका छन् ।
आफूलाई हटाउने योजना तुहाउन सफल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका तीन जनालाई मन्त्री बनाउने शाहीको योजना थियो । जसअनुसार ओली पक्षका नेताहरु सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दबहादुर बुढा हटाइन लागेका थिए ।
उनीहरुले फेसबुकमा बिदा समेत मागिसकेको चर्चा थियो । तर अहिल्यकै अवस्थामा ओली पक्षका सबैलाई हटाएर मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्दा सन्देश नराम्रो जाने भएपछि प्रचण्डले नै फोन गरेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनेका हुन् ।
ओली पक्षका मन्त्री हटाउन लागिएपछि कतिपयले नेकपाको एकता अब टुट्ने चेतावनी दिएका थिए । आफुखुशी मन्त्री हटाउँदा पार्टी एकिकरणबाट अलग हुने धम्की ओली पक्षका नेताहरुले दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा विवाद घट्नुको साटो झन बढ्ने भएपछि मुख्यमन्त्री शाही तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद हेरफेरको निर्णयबाट पछाडी हटेका हुन् ।
असोज २५ गते मुख्यमन्त्रीका प्रत्यासी यामलाल कँडेलले १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णाालीदेखि बालुवाटारसम्मको नेकपा विवाद उत्कर्षमा छ ।
तर पेलेरै आफ्ना मन्त्रीलाई हटाउन खोजिएको प्रयास रोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही राहत भएको छ । पछिल्लो समय कर्णालीको विवाद झन् बढ्नुका साथै प्रचण्डसँगको वार्ता पनि अगाडी नबढेपछि ओलीलाई तनाव बढेको थियो ।
सुशासन तथा सदाचारिता कायम राख्न कार्यालय प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका : प्रमुख आयुक्त राई
हुम्लाका स्थानीयवासी औषधोपचारबाट बञ्चित
सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव, स्थानीयवासी मर्कामा